Nquma umfanekiso kunye noMzekeliso ngeendlela ezahlukeneyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Nqumama umfanekiso kunye ne-Illustrator
Xa usebenza neefoto, uyazi ukuba ezo uzithatha kwi-Intanethi zisenokungagqibi. Nokuba yeyiphi oyenzayo ngeselula yakho okanye ngekhamera (ngaphandle kokuba uthatha iifoto ezisesitudiyo esilawula ukukhanya, izibane kunye nezithunzi ...). Ngapha koko, nokuba bayenza apho, iingcali zihlala zithinta kamva. Ngesi sizathu, xa kuziwa ekuboniseni le mifanekiso, bahlala bedlula kwiseshoni "yentsimbi kunye nepeyinti". Kwaye enye yezenzo eziphindaphindwe kakhulu kukusika umfanekiso kwi-Illustrator. Kodwa ngaba uyazi ukuba ungayenza njani?
Ukuba uhlala uzibuza ukuba abanye benza njani isivuno somfanekiso kwi-Illustrator kodwa awukwazanga ukufunda, namhlanje siza kuyisombulula le ngxaki kunye nawe. Kwaye siza kuyenza ngokukunika iindlela ezimbini ezahlukeneyo onokukhetha kuzo ukuze ukhethe eyona ikukholisayo okanye leyo uzive ukhululekile kuyo. Zombini kulula kakhulu ukuzisebenzisa, ke qaphela.
1 Sika umfanekiso kunye ne-Illustrator kunye nemaski yokunqunyulwa kwayo
2 Sika umfanekiso kunye noMzekeliso ngokulula
3 Kuthekani ukuba into endiyifunayo kukusika umzobo kwifoto?
Sika umfanekiso kunye ne-Illustrator kunye nemaski yokunqunyulwa kwayo
Siya ngokhetho lokuqala esifuna ukukufundisa lona. Eyona yeyona inzima kakhulu, kodwa ngokwenyani Kulula kakhulu ukufaka isicelo ukuba ulandela amanyathelo esiza kukunika wona. Ukwenza oku, esinye sezixhobo ezibalulekileyo oya kuthi uzidinge kukusikwa kwemaski. Oku kungaphakathi kwi-Illustrator ke akufuneki ukhuphele nantoni na. Oku kulawula ukuthatha inqaku lesithombe njengeyona iphambili kunye nokusika yonke into ejikeleze yona, ishiya indawo elinganayo ngokujikelezileyo.
Ewe ngoku, amanyathelo ngala:
Vula inkqubo kunye nomfanekiso ofuna ukulima.
Nika iiMilo (elo qhosha lincinci likuvumela ukuba wenze iimilo ezahlukeneyo, ezinje ngexande, erhangqiweyo, isixhobo se-ellipse, ipholigoni, inkwenkwezi ...) Unokukhetha eyona ikulungeleyo. Kuya kufuneka ubeke eli nani kanye kwinxalenye yefoto ofuna ukuyigcina ukusukela, yonke into engaphandle komfanekiso uya kulahleka. Umzekelo, ukuba unefoto yobuso, into eqhelekileyo kukuba uyifaka intloko, kwaye mhlawumbi yinxalenye yentamo namagxa, kodwa ayikho enye into.
Khangela kakuhle inani. Kwaye akunyanzelekanga ukuba uyibeke ngokugqibeleleyo okokuqala, esi sixhobo sikuvumela ukuba kamva wenze uhlengahlengiso njengokuyinyusa ngakumbi, ukuyithoba okanye ukuyenza incinci. Ewe ukuyifumana, kuya kufuneka ucofe iqhosha lokukhetha, kungenjalo ayizukujongeka ilungile.
Qinisekisa ukuba imilo ihlala ingaphezulu kwesithombe. Kwaye uzibuze, yintoni na? Ewe, kwimenyu yolungelelwaniso, eyona nto ikhuselekileyo kukuba unomaleko wesithombe sakho, kwaye emva koko umaleko onenani olwenzileyo. Ewe, loo maleko omzobo kufuneka abe ngaphezulu kwesithombe, hayi ngaphantsi. Oku kutshintshwa ngokulula ngokuhambisa olo luhlu ngemouse. Olunye ukhetho kukukhetha lo milo kwaye ucofe iNjongo / ulungiselele / uhambise ngaphambili
Masinciphise! Lifikile ixesha lokuba uqalise ukucoca umfanekiso. Ukwenza oku, kuya kufuneka ukhethe umaleko onefoto epheleleyo. Ngoku, betha iNjongo / yokuCoca iMask / Yenza. Kwaye iya kuyenzela ngokuzenzekelayo imveliso yesityalo. Akukho Okuninzi!
Sika umfanekiso kunye noMzekeliso ngokulula
Umthombo: iingcebiso ngevidiyo
Indlela elandelayo yokunqunqa umfanekiso ilungile ilula kunangaphambili, nangona ingakuvumeli ukuba udlale ngeefom. Oko kukuthi, kuyakuvumela ukuba wenze uxande okanye isikwere, kodwa akukho enye into. Ke unokuhlala uyidibanisa naleyo yangaphambili.
Ngoku, ngawaphi amanyathelo?
Vula i-Illustrator kunye nomfanekiso ofuna ukuwutyala.
Yalatha kwisixhobo esithi "uKhetho" kwibar yesixhobo ebonakalayo kwi-Illustrator. Liqhosha lokuqala elivela ngasekhohlo.
Cofa kumfanekiso (oku kukuqinisekisa ukuba ukhethiwe kodwa, ukuba unawo kuphela loo mfanekiso ungazigcina kweli nyathelo.
Kwiphaneli ephezulu uya kuba nesixhobo se "Crop Image". Cofa kuyo.
Ngoku unokufumana isilumkiso esithi: “Xa ifayile edityanisiweyo isikiwe, ikopi yentsusa iyafakwa. Ifayile yokuchama kwindawo exhunyiwe ayisayi kuchaphazeleka. ' Awunakukhathazeka, betha u-Ok kwaye yiyo ke loo nto. Ukuba awusifumani isilumkiso, akukho nto yenzekayo, kodwa kuya kufuneka uqiniseke ukuba unayo ikopi yomfanekiso wokuqala okanye umfanekiso wento enokwenzeka.
Ngoku uza kubona umfanekiso ujikelezwe yimiphetho engapheliyo onokuyirhuqa, wenze encinci, njl. Kule meko kuya kufuneka uhlengahlengise umfanekiso owufunayo kwelo xande okanye isikwere, kuba iya kuba yinto eza kuhlala isemfanekisweni. Yonke into engaphandle kwayo iya kucinywa.
Xa usikiwe usenzile, kuya kufuneka ucofe i Faka iqhosha phezulu, okanye Ngena.
Yiyo ke loo nto, uya kuba nomfanekiso oqingqiweyo kwaye ukulungele ukuwupapasha okanye uwusebenzise naphi na apho ufuna khona. Ngoku, unokuthambisa imiphetho okanye usebenzise umzobo ukusika enye into.
Kuthekani ukuba into endiyifunayo kukusika umzobo kwifoto?
Khawufane ucinge ukuba unefoto efanelekileyo. Kodwa kuyacaca ukuba ufuna into enye kuphela kuloo foto, yonke enye into ongayifuniyo okanye ongayifuniyo. Xa kuziwa ekunqandeni, phantse akunakwenzeka ukuba ulahle yonke imvelaphi ngaphandle kokulahlekelwa yinxalenye yento oyifunayo. Kodwa kukho indlela yokwenza.
Apha sikunika amanyathelo:
Vula i-Illustrator kunye nomfanekiso owufunayo.
Ngomfanekiso okhethiweyo, cofa kwisixhobo se «Pen» kwibar yesixhobo yasekhohlo. Ngoku, iikhosi zakho ziya kuba luhlobo lwepeni.
Cofa kwindawo apho ufuna ukulima khona. Ewe kunjalo, kwinqanaba lomjikelo wayo (sicebisa ukuba ushiye indawo encinci ukunqanda ukungasika into ongafanele ukuyisika.
Ngoku, kuya kufuneka ujikeleze into ofuna ukuyisika de ufike kwindawo yokuqala kwakhona.
Okokugqibela, shaya into / iMask yokuCoca / Yenza. Kwaye kuya kufuneka ufumane umfanekiso owawufuna ukuwutyala. Ewe ungayibona imvelaphi, kodwa iya kuba mbalwa, kwaye ungasoloko uthambisa ulwandlalo ukuze ingabonakali kangako.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Nqumama umfanekiso kunye ne-Illustrator
Ungayiguqula njani imibala kwi-Photoshop
Uyenza njani into ebambekayo kwi-Photoshop, inyathelo ngenyathelo